Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Tonga Na -agbasa Akụkọ » Akuko ikpe COVID-19 izizi na Tonga
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tonga Na -agbasa Akụkọ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi ala Tonga Pohiva Tu'i'onetoa
Onye isi ala Tonga Pohiva Tu'i'onetoa kwuru na gọọmentị na-eme atụmatụ ime ọkwa na Mọnde ma a ga-amachibido mkpọchi obodo.
Gọọmentị Tonga ga-ekwupụta na Mọnde ma a ga-etinye agwaetiti ahụ n'okpuru mkpọchi mba.
Enwere otu ikpe COVID-19 n'etiti ndị njem 215 si n'obodo Christchurch bịa.
Ihe dị ka pasent 31 nke ndị bi na Tonga agbaala ọgwụ mgbochi zuru oke yana pasent 48 enwetala opekata mpe otu dose.
Ndị ọrụ Tongan kwupụtara nke ahụ Tonga enwekwaghị coronavirus mgbe onye njem si ụgbọ elu si Christchurch, New Zealand nwalere ihe dị mma maka nje COVID-19.
Nke a bụ ọrịa COVID-19 izizi edekọtara na alaeze Polynesia kemgbe mmalite nke ọrịa coronavirus zuru ụwa ọnụ.
N'okwu redio nke taa, Prime Minista Tonga Pohiva Tu'i'onetoa gosipụtara na enwere otu ikpe COVID-19 n'etiti ndị njem 215 si n'obodo Christchurch bịa.
Tu'i'onetoa kwuru na gọọmentị na-eme atụmatụ ime ọkwa na Mọnde ma a ga-amachibido mkpọchi obodo.
Ka ọ dị ugbu a, praịm minista chọrọ ka ndị Tongan niile rube isi na ndọpụ uche anụ ahụ na ịgbaso ụkpụrụ metụtara coronavirus.
Dabere na TongaOnye isi ndị ọrụ ahụike Siale 'Akau'ola, ndị ọrụ ahụike, ndị uwe ojii na ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Fua'amotu mgbe ụgbọ elu Christchurch bịarutere bụ ndị edobere iche. Ọ gbakwụnyere na agbaala ndị niile na-arụ ọrụ nso ụgbọ elu ahụ ọgwụ.
Christchurch Ndị njem ụgbọ elu gụnyere ndị ọrụ oge na ndị otu egwuregwu Olympic nke Tonga.
Tonga dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke New Zealand, ma bụrụkwa ebe obibi ihe dị ka mmadụ 106,000.
Ihe dị ka 31% nke ndị Tonga bụ ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke yana 48% enweela opekata mpe otu dose, dị ka otu nyocha ụwa anyị na data si kwuo.
Tonga bụ otu n'ime mba ole na ole fọdụrụ n'ụwa zere ntiwapụ nke COVID-19. Dị ka ọtụtụ ndị agbata obi ya, ịnọpụ iche nke Tonga enyerela aka idobe ya mana ọ na-eche nnukwu ihe ịma aka ihu ma ọ bụrụ na nje ahụ ejidere n'ihi usoro ahụike enweghị akụrụngwa ya.
Mba Fiji dị nso zere nnukwu ntiwapụ ruo Eprel, mgbe ụdị Delta dị iche iche nke coronavirus dọwara agbụ agwaetiti ahụ, butere ihe karịrị mmadụ 50,000 wee gbuo opekata mpe 673.